Musharrax C/raxmaan C/shakuur oo gaaray degmada Dhuusa Mareeb – STAR FM SOMALIA
Musharraxa u taagan xilka Madaxweynaha C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud, halkaasoo ay gacanta ku hayaan Ururka Ahlusuna Wal-jameeca.
C/raxmaan C/shakuur ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Dhuusa Mareeb, waxaana uu kulamo uu la leeyahay qeybaha kala duwan bulshada ku nool Dhuusa Mareeb iyo mas’uuliyiinta Maamulka Ahlusuna.
Mr Warsame oo deegaan ahaan ka soo jeeda Dhuusa Mareeb ayaa doonaya inuu miisaan u yeelo musharaxnimadiisa, iyadoo Maamulka Ahlusuna ee ka jira Guriceel iyo Dhuusa Mareeb ay horay u diideen Maamulka Galmudug ee sanadkii hore lagu dhisay Cadaado.
Waxaa uu kula kulmay magaalada Dhuusa Mareeb Hoggaamiyaha Maamulka Ahlusuna ee Gobolada Dhexe Sheekh Shaakir.
Ahlusuna oo ka mid ah xooggaga siyaasada ee dalka ka jira ayaa horay dagaalo la galay Kooxda Al-Shabaab, waxaana ay dhowaan diiday wada hadal ay la gasho Maamulka Galmudug, dhowr jeer oo hore ayay ku eedeeyeen dowladda Federaalka inay fara gelin ku wado Galgaduud.
Magaalada Dhuusa Mareeb ayaa ah caasimada Maamulka Galmudug, waana halkii lagu bilaabay qorshaha maamul u sameynta Galmudug, halkaasoo dhowr jeer uu tagay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud., kana qeyb galay shirarkii dib u heshiisiinta ahaa ee ka dhacay halkaas.